ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအား ဒေသတွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းခွင့်ပေး၍ နယ်စပ်အနီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုချက် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ငြင်းပယ်။ မြန်မာ၏ ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာသာလျှင်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာမည့် ဒုက္ခသည်များကို ခေါ်ယူလိုက်သလို ဖြစ်မည်ဟု ပြော။ – H2Oupdatenews
ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအား ဒေသတွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းခွင့်ပေး၍ နယ်စပ်အနီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုချက် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ငြင်းပယ်။ မြန်မာ၏ ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာသာလျှင်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာမည့် ဒုက္ခသည်များကို ခေါ်ယူလိုက်သလို ဖြစ်မည်ဟု ပြော။
oungmarine11@outlook.com 25/08/2020	1 Comment
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာ ) များအား ဒေသတွင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းခွင့် ပေးအပ်၍ နယ်စပ်အနီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုမှုများကို ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရက ပယ်ချလိုက်သည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ ရေးသားသည်။
ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီပြဿနာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအား နှစ်ထောင်းအားရဖြစ်စေမည့် အဆိုပါတောင်းဆိုချက်သည် အကြပ်အတည်းပြဿနာကို အချိန်ဆွဲရာရောက်ပြီးလျှင် နောက်ထပ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ နိုင်ငံအတွင်း ပိုမိုဝင်ရောက်လာစေရန် သွေးဆောင်ပေးသလို ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဋ္ဌာန အတွင်းဝန် မာဆွတ်ဘင်မိုမန်က ဝေဖန်ရှုတ်ချလိုက်သည်ဆို၏။
တနင်္လာနေ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဋ္ဌာန ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှု စင်တာက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် “ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်၏ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများဆီသို့ ချဉ်းကပ်မူ “ အမည်ရှိ အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် မာဆွတ်ဘင်မိုမန်က ဖော်ပြရာ၌ “ ရှင်းရှင်းပြောရမည်ဆိုလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကျန်ရှိနေသေးသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား ဆွဲဆောင်ရာရောက်စေမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝှိုက်၍ဖြစ်စေ ခွင့်ပြု နိုင်ခြင်း မရှိသည်မှာ သေချာလျှက်ရှိကြောင်း၊
ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှအစိုးရအနေဖြင့် ဒေသတွင်းပေါင်းစည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သောမည်သည့် အယူအဆကိုမဆို ပယ်ချခဲ့သည်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်မြောက်ဖျားပိုင်းရှိ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့၏ ကျန်းမာရေး-ပညာရေး-အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဆက်နွယ်သောအရေးကိစ္စများတွင် ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ပါဝင်စားသော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို မြန်မာအစိုးရနှင့် စကားပြောဆိုကြရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ သို့သော် ရခိုင်တွင်ကျန်ရှိနေသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သို့ ဝင်ရောက်လာရန် အားထုတ်မှု မတွေ့ရသေးကြောင်း “ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ရည်ရွယ်ရှင်းလင်းထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီပြဿနာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုအတွင်း၌ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေးနှင့် နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးတို့အထိ ဝိုင်းပယ်လျှက် ဖိနှိပ်ရက်စက်ခြင်းခံရသူတို့၏ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြဿနာမှာ မြန်မာ၏ ပြည်တွင်းရေးဖြစ်၍ မြန်မာနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အဖြေရှာရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ သံတမန်နှင့် ဆက်စပ်နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ကျွမ်းကျင်သူများ တက်ရောက်သည့် အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ၌ မာဆွတ်က ပြောဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများမှ ထွက်ပြေးလာသူများအား အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်စိမ့်သောငှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ယာယီလက်ခံခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပြန်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း ယခင်စောစောပိုင်း ၁၉၇၈၊ ၁၉၉၂ -၉၃ ခုနှစ်များတွင် အစုအပုံလိုက် ထွက်ခွာလာသူများသည် နေရပ်ပြန်သွားပြီးနောက် ဖိနှိပ်မှုများ ပိုမိုများပြားလာကြောင်း၊ ထိုအတွက် ရေရှည်တည်တန့်သော နေရပ်ပြန်ရေးဖြစ်ထွန်းရန်နှင့် နောင်တွင် အလားတူဖြစ်ရပ်များ ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊
၎င်းတို့အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ခံကျင့်သုံးကြသည့် စည်းမျဉ်းအခြေခံများကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သည်ကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ဆန်းစစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့အပေါ် တာဝန်ယူ-တာဝန်ခံမှူနှင့် ပတ်သ်က၍ နိုင်ငံတကာ တရားခုံရုံး ( ICJ ) နှင့် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး ( ICC ) တို့တွင် အရေးပါသော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊
ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီအရေးတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် အစကနဦးတည်းက နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်း၍ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနှင့် ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံ၍ ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီများအတွက် လုံခြုံ ဘေးကင်းသော အခြေအနေတွင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်ပြန်ရေးကို စောစီးစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူထားသည့်မူဘောင်အစီအစဉ်နှင့် ပုံမှန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ ဘဝရပ်တည်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် အခြေခံများဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် စေတနာအလျောက် ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းတို့အတွက် အခိုင်အမာရပ်တည်လျှက်ရှိကြောင်း၊
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် မြန်မာဘက်မှ အပြင်းအထန်တောင်းဆိုမှုနှင့် အခြားနိုင်ငံအချို့၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ နေရပ်ပြန်ပို့ရေးကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါအားထုတ်မှုများ ပျက်ပြားရခြင်းသည် ( မြန်မာအစိုးရ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်းကို ရည်ညွှန်းလျှက် ) ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအတွက် မြန်မာအာဏာပိုင်များ၏ရိုးသားမှုကို (သံသယရှိခြင်း)နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် စိတ်ချယုံကြည်မှုမရှိခြင်းတို့ကို ပြသလျှက်ရှိကြောင်း၊
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် မိတ်ဆွေ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်းရှိအခြားနိုင်ငံတို့အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ စီးပွားရေး- နိုင်ငံရေးအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးသည်ကို လက်ခံယုံကြည်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တံခါးပေါက်ဝတွင်ရှိနေသည့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အား ဝိုင်းအုံတောင်းဆိုလျှက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းအစား ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယမြောက် သားကောင် ဖြစ်ရသည့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်၏ လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရင်း မြန်မာနိုင်ငံအား လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်နှင့် မူဘောင်သဘောတူညီချက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ ပူးပေါင်းမှု အခန်းကဏ္ဍကို တိုးမြှင့်စေလိုကြောင်း၊
ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြန်မာအာဏာပိုင်များ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပုံမှန်ဖြစ်ထွန်းလာအောင် ဘာတစ်ခုမှ လုပ်မပေးခြင်းဖြင့် ပြန်လာသူများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် နေရပ်ပြန်ရေး အားထုတ်မှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် ကိစ္စမှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြင့် မဟာဗျူဟာကို ရင်ဆိုင်နေကြရကြောင်း၊
ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ နေရပ်ပြန်ကြပြီးလျှင် ရှင်းလင်းသော နိုင်ငံသားဖြစ်မှု လမ်းကြောင်းဖြင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့အနေဖြင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ ရပ်တည်စေလိုကြောင်း၊ ဒေသတွင်း၌ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် မြန်မာ၏ အိမ်နီးချင်း တရုတ်-အိန္ဒိယတို့သည် အရေးပါကြောင်း၊
ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအပါအဝင် လုံခြုံဘေးကင်းရေး၌ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အစိုးရက အသေးစိတ်စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များထံမှ လုံလောက်သော အထောက်အပံ့များ ရရှိပါက ရေတိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့် အခြားတိုးတက်မှုများရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့ အမြောက်အများရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် လူဦးရေအချိုးအစားမညီမျှမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု၊ ရေပေးဝေမှုအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ လူငယ်များအပေါ် အစွန်း ရောက်အယူအဆများ ဝင်ရောက်လာနိုင်မှုနှင့် လူကုန်ကူးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စ၊ လူသတ်မှု၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ လိင်ကုန်သွယ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ ခိုးမှု၊ ဒါးပြမှုတို့အပါဝင် အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်များအကြောင်းကို ထောက်ပြပြီး ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီအချို့အား လုံခြုံမှုရှိသော ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြား ရေးဋ္ဌာန အတွင်းဝန် မာဆွတ် ဘင်မိုမန်က ရှင်းပြပြောဆိုသည်။
((( Dhaka Tribune., August 24th, 2020,” Bangladesh rejects local integration of Rohingyas. By: Humayun Kabir Bhuiyan. “ ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်။ )))
One Reply to “ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအား ဒေသတွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းခွင့်ပေး၍ နယ်စပ်အနီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုချက် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ငြင်းပယ်။ မြန်မာ၏ ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာသာလျှင်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာမည့် ဒုက္ခသည်များကို ခေါ်ယူလိုက်သလို ဖြစ်မည်ဟု ပြော။”
တိုငျးပွညျတဈပွညျတှငျ နိုငျငံခွားရေးဋ်ဌာနဆိုသညျမှာ အလှနျအရေးကွီးပါ၍ အိမျနီးခငြျး ဘငျ်ဂလားဒကျရျှနိုငျငံခွားရေးဋ်ဌာန၏ ဒုက်ခသညျဘငျ်ဂါလီမြားအပေါျ အမွငျကို အတတျနိုငျဆုံး အပွည့ျအစုံ ဖောျပွပါသညျ။
ရိုးသားစှာ ပွောရလြှငျ နှဈနိုငျငံနယျစပျတို့တှငျ ဟိုဘကျ သညျဘကျရှိသူမြား နထေိုငျကွမညျမလှဲဖွဈပါသညျ။ အခြို့ဆိုလြှငျ ဘိုးစဉျဘောငျဆကျ နထေိုငျလာကွဖှယျရှိ၍ မွနျမာနိုငျငံ၏ တညျဆဲနိုငျငံသားဥပဒအေရပငျလြှငျ နိုငျငံသား ဖွဈထိုကျသူမြား ရှိနိုငျပါသညျ။
ရခိုငျမွောကျဖြားသညျ မွနျမာအုပျခြုပျမှုနှင့ျ ဝေးလံနပွေီး ဘငျ်ဂလားဒကျရျှသညျ ၁၉၇၁-ခုနှဈ၌ ပွငျးထနျသော ပွညျတှငျးစဈ ဖွဈပှားပွီးနောကျ ပေါျထှနျးလာသော နိုငျငံဖွဈသညျ။
မတညျငွိမျသောနယျမွတှေငျ နထေိုငျကွသည့ျ သကျကွီးရှယျအို- မိနျးမနှင့ျ ကလေးမြားသညျ ဟိုဘကျ ဒီဘကျပွေးရငျး ဘယျနိုငျငံသားမှနျး မသိနိုငျ။ သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး စာမတတျသူ အမြားစုဖွဈနသေညျ။ တဈနှဈထကျတဈနှဈ လူဦးရတေိုးလာပွီး ပွူနာလညျး ပေါငျးစုံလာသညျ။
ကံဆိုးခငြျတော့ သူတို့အား လူမြိုးတဈမြိုးအဖွဈ လောျဘီအလုပျခံရခြိနျသညျ အရှေ့အလညျပိုငျးနှင့ျ ကမ်ဘာအရပျရပျတှငျ ဘာသာရေးအစှနျးရောကျတို့ အကွမျးဖကျခြိနျနှင့ျ တိုကျဆိုငျနသေညျ။
ကြှနျတောျ ယခုအသကျအရှယျအထိ ဖတျမှတျဖူးသမြှ စာပမြေား၊ ရောကျခဲ့ဖူးသမြှ ကမ်ဘာအရပျရပျတှငျ “ ဘငျ်ဂါလီ မှတျစလငျ “ တို့သညျ အခွားလူမြိုးမြားထကျ နိမ့ျကကြွောငျး တဈခါမှ မတှေ့ဖူးပါ။ နာ့သျတဂိုးနှင့ျ ဆာဂစြျတာရေး ကဲ့သို့ ကမ်ဘာသိထူးခြှနျသူမြား ထှနျးပေါျခဲ့ဖူးပွီး အလှနျရှေးကသြည့ျ လူမြိုးတဈမြိုးဖွဈသညျ။
ဘငျ်ဂလားဒကျရျှနိုငျငံခွားရေးဋ်ဌာန၏ အမွငျသညျ တဈဖကျသပျဆနျလှနျးသညျဟု ကြှနျတောျမွငျသညျ။
ကြှနျတောျတို့ကလညျး ကြှနျတောျတို့ဥပဒအေရ နိုငျငံသားပေး- သူတို့ကလညျး သူတို့ဖကျ၌ နိုငျငံသားအဖွဈ လကျခံယုံသာရှိသညျ။
ယခုတော့ ရိုဟငျဂြာလူမြိုးဆိုသညျမှာ မွနျမာနိုငျငံ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျဖြား၌သာ တှေ့မွငျနိုငျပွီး ဘငျ်ဂလားဒကျရျှ၌ လုံးဝမရှိသော လူမြိုးအဖွဈ ထူးခွားစှာတှေ့နရေကွောငျး ယခုသတငျးက သကျသဖွေဈသညျ။
Previous Previous post: ပြင်သစ်တွင် Facebook က ဒါဏ်ကြေးအပါအဝင် နောက်ကြောင်းပြန်အခွန် ယူရို ၁၀၄-သန်း ပေးဆောင်ရမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်။ နိုင်ငံသားတိုင်း အခွန်ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိ၍ နိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သော ပြည်ပကုမ္ပဏီများလည်း နိုင်ငံတော်အား အခွန်ပေးဆောင်ကြရမည်။
Next Next post: အသေခံဗုံးခွဲမှု ဆက်တိုက်နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နိုင်ငံ့တောင်ပိုင်းတွင် စစ်အုပ် ချုပ်ရေး ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းရန် ဖိလစ်ပိုင်တပ်မတော်ပြင်ဆင်။ ၁၅-ဦး သေဆုံးရသည့် လူစည်ကားရာ မြို့လည်ပိုင်း တိုက်ခိုက်မှုတွင် အမျိုးသမီး အသေခံဗုံးခွဲသူပါဝင်နေ